बार्यनसँग हारेपछि प्रशिक्षक जिदानले भने– बेलले भोलि नै रियल छोडे हुन्छ ! « Khabarhub
बार्यनसँग हारेपछि प्रशिक्षक जिदानले भने– बेलले भोलि नै रियल छोडे हुन्छ !
काठमाडौं – रियल मड्रिडका प्रशिक्षक जिनेदिने जिदानले प्रि–सिजनको पहिलो खेल खेलेका ग्यारेथ बेलले क्लब छाड्नु पर्ने बताएका छन् ।
आइतबार बिहान सम्पन्न इन्टरनेसनल च्याम्पियन्स कपमा वार्यन म्युनिखसँग रियल पराजित भएपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
१० खेलाडीमा सिमित वार्यनसँग ३–१ गोल अन्तरले पराजित भएको रियलका लागि बेलले कुनै पनि समय राम्रो खेल्न सकेका थिएनन् ।
उनलाई क्लबमा राख्नु क्लबका लागि भार भएको महसुस गरेको क्लवले उनलाई बिदा गर्दै उक्त स्थान खालि गर्न चहाएको छ ।
‘बेल अन्य क्लबमा गए हुन्छ । क्लबले उनलाई बेच्न खोजेको छ,’ जिदानले खेलपछि भने,‘यदी उनी भोलि नै गए पनि राम्रो । यो व्यक्तिगत कुरा होइन । मसँग बेलको विरोध गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन तर, मैले निर्णय गरिसके । सबैका लागि समय भएको छ । त्यसैले सबैले आफ्नो सुरक्षित बाटो खोजे हुन्छ ।’
क्लबले बेलको स्थानमा नयाँ खेलाडीलाई मैदान उतार्ने लक्ष्य समेत बनाएको जिदानले बताएका छन् । उनले बेलको स्थानमा जापानीज युवा खेलाडी टेकेफुजा कुडोले स्थान लिन सक्ने समेत बताएका छन् । वार्यनविरुद्धको खेलमा कुडोले खेलेका थिए ।
प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०७६, आइतबार २ : १७ बजे